လူမှုမီဒီယာ Do နှင့် Don'ts | Martech Zone
Social Media Do နှင့် Don'ts
စနေနေ့, မတ်လ 14, 2015 စနေနေ့, မတ်လ 14, 2015 Douglas Karr
နောက်တစ်ညမှာအခြားစျေးကွက်တစ်ခုမှာငါစကားပြောနေတာဆိုတော့လူမှုမီဒီယာ၊ ဖြစ်ရပ်တွေ၊ သူကလူမှုမီဒီယာကနေရလာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုသူမမြင်တွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတာပြောပြခဲ့တယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါလုံးဝသဘောမတူဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက်တိုးတက်နေချိန်တွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်အချိန်အတော်အတန်တည်ငြိမ်နေကြောင်းလူတို့သတိပြုမိနိုင်သည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာငါ့ရဲ့အချိန်အများစုဟာကျွန်တော့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ရက်ပြင်ပမှာသီးသန့်ဆွေးနွေးခြင်းတွေဖြစ်တယ်။ ငါနေ့စဉ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စကားပြောဆိုမှုများတွင်နေ့စဉ်ပါ ၀ င်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှု၏အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။
အဲဒါဟာအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုလိုပါသလား? မဟုတ်ပါ။ ငါဆိုရှယ်မီဒီယာပရိသတ်ကိုတက်တက်ကြွကြွငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါပိုက်ဆံဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဘူး။ နှင့်အညီ, ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါအမြဲတမ်းဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ရောင်းရန်ချင်ကြဘူး။ ငါစားပွဲပေါ်မှာပိုက်ဆံချန်ထားသလား ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် - သို့သော်ငါနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်လိမ့်မည်ဟုပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်အောက်ပါခြုံငုံဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်ထပ်တူထပ်။
အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်စာရေးခြင်းနှင့်စကားပြောခြင်းအခွင့်အလမ်းများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောနေရာဖြစ်သည်။ လူတွေကကြီးမားတဲ့နံပါတ်ကိုမြင်တော့သူတို့ကငါ့ဆီတံခါးလာဖွင့်တယ်။ ငါအဲဒီအခွင့်အရေးတွေရရင်သူတို့တိုက်ရိုက်ဝင်ငွေရတယ်။ ဒီတော့ - ရေရှည်တွင်ကျွန်ုပ်သည်လူမှုမီဒီယာအသုံးပြုမှုမှအကျိုးရရှိပါသလား။ ငါထင်တယ်!
ငါလူမှုရေးမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အသုံးချတက်ကြွစွာရပ်တန့်မလား? လုံးဝမဟုတ်ပါ - ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပရိသတ်ကိုတည်ရှိနေသောလမ်းကြောင်းတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်အလုပ်အတွက်တန်ဖိုးရှိသည့်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုနှင့်လူများဝယ်ယူရေးဆုံးဖြတ်ချက်များအားသုတေသနပြုသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ မဟုတ်ဘူး ချက်ချင်းအဖြစ် or အကျိုးရှိသော သည်အခြားလိုင်းများငါ့ထံသို့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကို silo'd channel တစ်ခုထက်ပိုပြီးအသုံးချတာထက် Cross-channel marketing နဲ့မြှင့်တင်ရေးတွေမှာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်တော်တိုးမြှင့်လိုက်ပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့လူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာကိုဘယ်လိုစီမံလဲ။
လူမှုကွန်ယက်များသည်သင်၏အလုပ်နှင့်စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အလွန်ကောင်းသည့်နေရာများဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သော့ချက်စကားစုများ၊ ဝေါဟာရများနှင့် hashtag များကို အသုံးပြု၍ လိုင်းများကိုရှာဖွေနေသောသုံးစွဲသူများ - သို့သော်၎င်းတို့သည်ရောင်းရန်ခက်ခဲသောနေရာမဟုတ်သောကြောင့်စစ်မှန်သောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်ယုံကြည်မှုနှင့်နားလည်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။
အာမခံ Octopus ရှိရှေးရှေးများသည်ဤနေရာတွင်အချို့သောအတူတကွပေါင်းသင်းခြင်းအားကြီးစွာသောအလုပ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည် အလွန်ကောင်းသောလူမှုမီဒီယာအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ hashtags၊ ပရိသတ်နှင့်အကြောင်းအရာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာဤအချက်အလက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ။ အကြံကောင်းပါတယ်
Tags: လူမှုမီဒီယာအကြံဥာဏ်လူမှုမီဒီယာအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကပြုသည်နှင့် don'ts
လူမှုရေးရောင်းဝယ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောအံ့ Ast စရာအချက် ၃ ချက်
မတ်လ 16, 2015 မှာ 10: 07 pm တွင်
Doug အလွန်သိကောင်းစရာများတစ်ခုလက်တွေ့ကျတဲ့အသုံးဝင်သော post ကို။